काठमाडौं बज्यो खतराको घन्टी ! उपत्यकामा २४ घण्टामा १०८९ संक्रमित थपिए , देश भरि कति संक्रमित थपिए? २७ जनाले ज्यान गुमाए – Jagaran Nepal
काठमाडौं बज्यो खतराको घन्टी ! उपत्यकामा २४ घण्टामा १०८९ संक्रमित थपिए , देश भरि कति संक्रमित थपिए? २७ जनाले ज्यान गुमाए
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबार थप एक हजार ८९ जनामा भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। काठमाडौंमा ७९९ जनामा, ललितपुरमा १२८ र भक्तपुरमा १६२ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै काठमाडौं उपत्यकामा अहिले ११ हजार ५९६ जना सक्रिय संक्रमित छन्।
काठमाडौंमा आठ हजार ४०७, ललितपुरमा एक हजार ८२७ र भक्तपुरमा एक हजार ३६२ जना सक्रिय संक्रमित छन्। पछिल्लो २४ घण्टामा १८ हजार ५८२ मा परीक्षण गर्दा नेपालमा थप तीन हजार ९१५ जना भाइरसका संक्रमित थपिएका हुन्। यसको संक्रमणबाट थप २७ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। योसँगै अहिलेसम्म १० हजार ३२९ जनाको मृत्यु भएको छ।
शुक्रबार दुई हजार ११८ जना निको भएका छन्। नेपालभर भने अहिले ३८ हजार ७९८ सक्रिय संक्रमित छन्। काठमाडौं उपत्यकामा थप एक हजार ८९ जना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन्।
पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा थप तीन हजार ९१५ जनामा भाइरस सङ्क्रमण देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार ११ हजार ७०८ पीसीआर परीक्षणमा दुई हजार ७६३ र छ हजार ८७४ एन्टिजेन परीक्षणमा एक हजार १५२ जना गरी कूल तीन हजार ९१५ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो ।
यो सँगै नेपालमा पीसीआर विधिबाट गरिएको परीक्षणमा भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या सात लाख २८ हजार ५३२ पुगेको छ । त्यस्तै एन्टिजेन परीक्षण गर्नेको सङ्ख्या ७४ हजार ३४ रहेको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टाको अवधिमा थप दुई हजार ११८ जना सङ्क्रमणमुक्त भएका छन् । यो सँगै हालसम्म नेपालमा सङ्क्रमणमुक्त हुनेको सङ्ख्या छ लाख ७९ हजार ४९५ पुगेको छ । नेपालमा सङ्क्रमणमुक्त हुने दर ९३ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
थप २७ को मृत्यु – नेपालमा सङ्क्रमणबाट थप २७ जनाको मृत्यु भएको छ । यो सँगै नेपालमा सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दश हजार २३९ पुगेको छ । नेपालमा सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुने दर १.५ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।